Imbali Yentliziyo Yengqondo
Intliziyo yokuqala yokuzibandakanya kubantu yayisungulwe kwaye i-patent ngonyaka wama-1950, kodwa kwada kwada ngo-1982 ukuba intliziyo yokusebenza eyenziwa yintliziyo, iJarvik-7, yafakwa ngempumelelo kwisigulane somntu.
Njengokuba kuninzi lwezokwelapha, intliziyo yokuqala yokufakelwa yenziwe kwisilwanyana - kulo mzekelo, inja. Usosayensi waseSoviet uVladimir Demikhov, ongumvulindlela kwindawo yokuguqulwa komzimba, wafaka intliziyo eyenza inja ibe yinja ngo-1937.
(Kwakungewona umsebenzi odumileyo kaDemikhov, nangona kunjalo-namhlanje uyakhunjulwa ngokukhutshwa kwentloko kwizinja.)
Okuthakazelisayo, intliziyo yokuqala yomenzi we-patented yenziwe ngu-American Paul Winchell, umsebenzi wakhe oyintloko owawufana nomqhubi we-ventriloquist and comedian. UWinchell naye wayenokuqeqeshwa koogqirha kwaye wayencedwa ekusebenzeni kwakhe nguHenry Heimlich, okhunjulwayo ngenxa yokunyangwa kwexesha elingxamisekileyo elinegama lakhe. Indalo yakhe ayizange isetyenziswe.
Intliziyo yokufakelwa kweLiotta-Cooley yafakwa kwisigulane ngo-1969 njengendlela yokuyeka i-stopgap; yatshintshwa yintliziyo yomnikeli iintsuku ezimbalwa kamva, kodwa isiguli safa kungekudala emva koko.
Intliziyo yeJarvik-7 yaveliswa ngumsululwazi waseMelika uRobert Jarvik kunye nomcebisi wakhe, uWillem Kolff.
Ngowe-1982, u-Seattle wamazinyo we-dentalist uDkt. Barney Clark wayengumntu wokuqala ozaliswe yiJarvik-7, intliziyo yokuqala yokuzikhethela ekujoliswe ukuba iphile ixesha elide.
UWilliam DeVries, onguchwepheshe wase-American cardiothoracic, wenza utyando. Isigulane saphila kwiintsuku ezingama-112. "Kwakunzima, kodwa intliziyo ngokwayo iqhube kakuhle," kusho uClark kwiinyanga ezilandelayo emva kokuhlinzwa kwakhe kwimbali.
Ukuqhutyelwa phambili kweentliziyo zentliziyo kubone impumelelo engaphezulu; Isigulane sesibini ukufumana iJarvik-7, umzekelo, sasihlala iintsuku ezingama-620 emva kokumiselwa.
"Abantu bafuna ubomi obusisigxina, kwaye nje ukuphila akulungile," kusho uJarvik.
Nangona le nkqubela, iintliziyo ezingaphantsi kwamawaka amabini ezenziwe zifakwe, kwaye le nkqubo isetyenziswa ngokuqhelekileyo njengebhulorho kude kube yintliziyo yokunikela. Namhlanje, intliziyo eqhelekileyo yintliziyo yi-SynCardia yexeshana Ingqoqo Yengqondo Yokuzibandakanya, i-96% yazo zonke iinguqu zokufakelwa kwentliziyo. Kwaye akufihla, ngexabiso lentengo malunga no-$ 125,000.
Thomas Edison - i-Kinetophones
Ukutya okunomsoco okanye ukutya okumeleyo
Imbali yePhepha lePhepha
Ukukholisa: Imbali yeTeksi
Imbali yeSpop kunye neeDetergents
Imbali yeeKhanya zeKrismesi
USherman Mills Fairchild - iDuramold Iizindiza - i-Spruce Goose
I-Crystal Display Display - I-LCD
Imbali yeColt Revolver
Ngaba amaMormoni avunyelwe ukusela itiye?
I-American Revolution: I-Battle of Saratoga
Ukunyusa nokunyusa izinto
Uluhlu lweeNgxelo ezingama-35 eziqhelekileyo ngesiNgesi
I-Ultraviolet Radiation Definition
2017 - 2018 I-SAT Imixholo yovavanyo lwemixholo
Imisebenzi Ephezulu apho Unokusebenzisa isiFrentshi
IEP Fraction Iinjongo zokuPhakamisa iMathematika
Ngaba 'Kufana noQe uQe' ufuna i-Subjunctive?
Uhlobo Olunene lweeRawnrops
Izizathu zokufumana uqeqesho lweKholeji
Abaviwa bakaMongameli base-2016 ... njenge-Dinosaurs!
IMfazwe kaWilliam William
Iimbali zeNkwenkwezi eziye zazama ukuphucula impumelelo
Isishwankathelo se-William Shakespeare's Play 'Njengoko Uthanda'
Venus kwiPropio Profile
IziCwangciso zeSifundo seNkrisimesi-IziCwangciso zezifundo eziphonononga le Holo yamaKristu
Jonga ezinye zeMvavanyo zeTriboluminescence
Yintoni ikholomu? Yintoni i-colonnade?